Dr. Tint Swe's Writings: How to Swallow Bitter Medicine ဆေးခါးကို ဘယ်လိုသောက်မလည်း
How to Swallow Bitter Medicine ဆေးခါးကို ဘယ်လိုသောက်မလည်း
ဆေးအများစုဟာ အဝင်ဆိုးတယ်။ ခါးတယ်။ သည်အတိုင်သောက်လို့ခက်တယ်။ ပျို့အန်ထွက်မယ်။ မျိုမကျလောက်ဘူး။ သုတေသနလုပ်ထားတယ်။ ဘယ်မျိုးဗီဇကနေ အဲလိုဖြစ်စေသလည်း။ ကလေးတွေက ခါးတာကို ပိုပြီးမခံနိုင်ကြဘူး။
အဝင်သက်သာနည်းတွေသုံးရတယ်။ ဆေးပြားအပေါ်ယံမှာ သကြားအုပ်ထားရတယ်။ ဥပမာ ဖျူရာမင်ဘီစီ သံဓါတ်ဆေး၊ ဗီတာမင်ဘီဆေး။ ဆေးတောင့်လို့ခေါ်ကြတဲ့ ကက်ပစူးလ်ခေါ် အဖုံးထဲမှာဆေးမှုံ့ထည့်ပေးထားရတယ်။ ဥပမာ အမောက်ဆာဆလင်။ တက်ထရာဆိုက်ကလင်း။ ဆေးရည်ကို အချိုရည်ရောထားတယ်။ Syrup နာမည်ပါရင် အဲတာမျိုးပဲ။
ငှက်ဖျားဆေး Quinine (ကွီနင်း) ကို ဆေးခါးကြီးလို့ သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။ ငှက်ဖျားကို ရောဂါတွေရဲ့ဘုရင်လို့ တင်စားကြတယ်။ အလက်ဇန်းဒါးစစ်ဘုရင်လည်း အသက် ၃၃ နှစ်သာရှိသေပေမယ့် ငှက်ဖျားနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ယူဆရတယ်။
ဆေးခါးတာကို ဘယ်လိုမျိုမလည်းအတွက် အကြံပေးချက်တွေရှိပါတယ်။ ချိုတာတခုခုနဲ့ရောသောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ရောလို့ရ မရ ဆရာဝန်ကိုအရင်မေးပါ။ မြန်မာပြည်မှာက ပျားရည်သုံးတာအစဉ်အလာဖြစ်နေတယ်။ တချို့က ပျားရည်နဲ့ မတည့်ပါ။ သူများတွေဆီမှာ ဖျော်ရည် ဥပမာ စပျစ်သီးဖျော်ရည်သုံးကြတယ်။ ဆေးမသောက်ခင်နဲ့ ဆေးမျိုပြီးမှာ အချိုရည်သောက်ပါ။ ကာဗွန်ထည့်ထားတဲ့ ဥပမာ ကိုကာကိုလာနဲ့တော့ မသင့်ပါ။ အရက်နဲ့တော့ ဘယ်တော့မှ မရောရပါ။
ဆေးပြားကို ခြေပြီးအစာတခုခုနဲ့ရောသောက်နည်းလည်းလုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်ဆေးတွေကိုသာ ခြေသင့်သလည်း Institute for Safe Medical Practices ကနေပြုစုပေးထားတာရှိပါတယ်။ ခြေလို့ရတဲ့ဆေးဆိုရင် ရေတစက်လောက်နဲ့ အရင်စိုစေလိုက်ပါ။ ၁၅ မိနစ်လောက်နေမှ ခြေပါ။ နောက်တနည်းက ဆေးကိုအေးအောင်လုပ်ထားရင် ခါးတာ သက်သာတယ်။ ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ပါ။ ဆေးသောက်ပြီး ရေခဲငုံလို့ရတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၈ နှစ်ကသိမ်းထားခဲ့တဲ့ သံသေတ္တာလေးကို ဖွင့်တော့ အထဲမှာ ရေဆေးပန်းချီကားလေးတချပ်တွေ့တယ်။ ကျွန်တော့်လက်မှတ်ပါပေမဲ့ နေ့စွဲမပါ။ ပန်းခ...
သမ္မတ၊ တပ်ချုပ်တို့နဲ့ ဒေါ်စုတွေ့ဆုံမှု မျှော်လင့်ချက...
Pregnancy selfies ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဓါတ်ပုံ
Urinary Tract Infection (1) ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်...
Urinary Tract Infection (2) ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်...
Aye Clinic အေးဆေးတိုက်
Old teaches all things အိုရ ပြိုမကျ
Old is not sold အဟောင်းကိုသန့်ရှင်းပေးခြင်း
Colombo Plan ကိုလံဘိုစီမံကိန်း
Dos and Don'ts သိပါပြီ
Gang and Garbage အမိုက်နဲ့ အမှိုက်
ODA ဂျပန် အိုဒီအေ
British Commonwealth ဗြိတိသျှဓနသဟာယအသင်း
War Reparations from Japan ဂျပန်စစ်လျှော်ကြေး
Men in History သမိုင်းထဲကလူကြီးများ
Half Nationalism တဖက်ပိတ်မျိုးချစ်
How to Swallow Bitter Medicine ဆေးခါးကို ဘယ်လိုသော...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ် (က)
Bitter pills ဆေးခါးကြီး
Colorado Springs shooting ကိုလိုရာဒိုပစ်ခတ်မှုနဲ့ က...
Baian Lishou Coffee ကြော်ငြာကော်ဖီ
Publisher စာအုပ်ထုတ်ဝေသူတွေလည်း ကျွန်တော့်ကိုပြော...
Learn the hard way စာကျက်ကြပါ
The Winter Thunder ဆောင်းမိုးကြိုးပစ်ပါစေ
Lets’ go! မောင်းပြီ
Commission fees ဆေးရောင်းချင်သူများ ကျွန်တော့်ကို ...
Rejoicing in the success of others မုဒိတာ
Fictional and Factual အနုပညာနဲ့ သုတပညာ
The doctor in history ရာဇဝင်ထဲက ဆရာဝန်
Beauty medication အလှဗေဒ
On behalf of့့
Refugee question ဒုက္ခသည်အရေး အငြင်းပွါးနေတဲ့ အမေရိ...
North Korea သို့ ပြုံယန်း
Constitution history မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ဖွဲ့စည်း...
Myanmar History မြန်မာ့သမိုင်း (၂)
Myanmar History မြန်မာ့သမိုင်း (၁)
Significance ဒေါ်စု၏ အရေးပါမှု
Healing Day တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်
Public Speaking လူကြားထဲ စကားပြောနည်း
The Losers ဗထက်ချိုက်
Dear Madam ကျောင်းအမရေ့့
‎Unloved‬ and Unwanted လူပိုဆိုတာ
Looking forward to မျှော်ကြည့်မိခြင်း
Burma’s top general: ‘I am prepared to talk and an...
The old fisherman တံငါအို
Army and USDP ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီလုပ်တာ ဘာနာသလည်း
STD rates rise dramatically
Cellulitis (သို့) Erysipelas
JADE မြေပြိုနဲ့ မြေမျို
I am embarrassed
Where tangled yarn ruins ones day အမယ်ဘုတ်ချည်ခင်
Bhagvad Gita above Constitution ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥ...
Welcome to Japan ဂျပန်ခရီးစဉ်
Vladimir Putin’s massive, triple-decker war room r...
Life is like that ဘဝဆိုတာ ကင်မရာ
The (Few) Generals That Don’t Exit in Myanmar
Shan ရှမ်းပြည်နယ်က ပွဲနှစ်ပွဲ
The expatriates အပြင်မှာနေကြသူတွေ
The Gate ရွှေတံခါးကြီး
I am notathief
‎Myanmar‬: Nation needs 'a revolution andastrong...
‎ASEAN‬ အိမ်တိုင်ယာရောက် အရောက်လာ၊ အရာရောက်ကြရဲ့လာ...
Letter fromaFar Country မဲဇာမှ စာတစောင်
US$40 ခက်တဲ့ကြားမှာ ကံတရားအားကိုးပါ
Election ink ရွေးကောက်ပွဲသုံးမင်
1990 and 1025 Elections
Big News သမတ ဘယ်သူဖြစ်မလည်း
D-Day and H-Hour ဒီနေ့ ဒီအချိန်မှာ
Ink and Imp မင် နဲ့ မှင်စာ
Rumor of War ကောလာဟလ
The Hoarse Race အသံနာတဲ့ပွဲ
Kitchen Cabinet မီးဖိုချောင် ကက်ဗိနက်
Steady mind စိတ်တည်ငြိမ်မှု
Color change အရောင်တွေ
Myanmar: President Sein warns of bloodshed if part...
Attention to the International Business Times